Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सलमानले किन रोके ‘नो इन्ट्री’ को सिक्वेल ? – Emountain TV
काठमाडौं, ४ असोज । अहिले बलिउड सुपरस्टार सलमान खान आफ्नो नयाँ फिल्म ‘दबंग ३’ को छायांकनमा व्यस्त छन् । फिल्मको मोसन पोस्टर पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । अब उनका प्रशंसकलाई फिल्मको ट्रेलरको व्यग्र प्रतिक्षा छ । केही दिनयता सलमानले ‘दबंग ३’ पछि दशक अगाडिको सुपरहिट फिल्म ‘नो इन्ट्री’ को सिक्वेलको छायांकन सुरु गर्ने चर्चा चलेको छ ।
तर, वास्तवमा यस्तो हुने लक्षण देखिएको छैन । सलमानले यो फिल्मको सिक्वेल गर्न नमानेको भारतीय मिडियाले बताएका छन् । फिल्ममा अभिनेता अनिल कपूर पनि हुने बताइएको छ । तर, उनीसँग तत्काल कुनै डेट्स नभएपछि सलमानले नै फिल्मको छायांकन रोकेको जानकारी प्राप्त छ । उनले अनिल बिना फिल्मको छायांकन गर्न चाहेका छैनन् ।
‘नो इन्ट्री’ को छायांकन रोकिनुमा सलमानको व्यस्तता पनि प्रमुख मानिएको छ । उनी चाँडै ‘विग बोस १३’ र फिल्म ‘किक २’ को छायांकनमा व्यस्त हुँदैछन् । अनिल र सलमान दुबैको डेट्स क्लियर भएपछि मात्र यो फिल्मको छायांकन सुरु हुनेछ । २००५ मा रिलिज भएको यो एक कमेडी फिल्म थियो, जसले बक्सअफिसमा जबरजस्त व्यापार गरेको थियो ।
फिल्ममा सलमान, अनिल कपूरका अलावा फरदीन खान, बिपाशा बासु, लारा दत्ता, ईशा देओल, बोमन ईरानी र सेलिना जेटलीलगायतका कलाकारहरुको अभिनय थियो । फिल्मलाई अनीस बाज्मीले निर्देशन गरेका थिए । लामो समयदेखि यो फिल्मको सिक्वेललाई चर्चा चलेको थियो । सम्भवतः अब यो फिल्म सलमानले ‘किक २’ भ्याएपछि सुरु हुनेछ । फिल्मिखबरबाट